သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ Deepfakes နှင့်မည်သို့ရှည်လျားသေးဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိသနည်း မာတင် Vrijland
သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ Deepfakes နှင့်မည်သို့ရှည်လျားသေးဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိသနည်း
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 26 2019 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
မကြာခဏဆိုသလိုငါကဒီမှာနက်ရှိုင်းသောအတုဇာတ်ကောင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည်နည်းစနစ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ အသစ်ကစာဖတ်သူများအဘို့, ကိုယ့်ဒီဆောင်းပါးမှာပါမှမြှုပ်နှံမယ့်အထူးကိစ္စများတွင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအသေးစိတ်အဲဒီမှာ add ချင်ပါတယ်ကြောင်းပြန်လုပ်ပါ။ သင်နေ့စဉ်သတင်းကိုလိုက်နာပါလျှင်, သင်နည်းစနစ်ရိုးရှင်းစွာလူများတို့သည်ကစားရန်တည်ရှိသောအရာကိုမြင်ကြလိမ့်မည်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုဤပြဿနာများ၏မှတ်စုယူကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပဲ။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။
Deepfakes GAN (General ရန်ဘက်ပြုသော Networks ကလုပ်ရမည်) ဆော့ဖျဝဲနည်းစနစ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကွန်ယက်မျိုးစုံ AI အစနစ်များပေါ်တွင် အခြေခံ. ခြစ်ရာကနေအတုထောက်လှမ်းရေးဆော့ဖျဝဲ, မယ့်ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ AI အ Artificial Intelligence အင်္ဂလိပ်; အရာ Artificial Intelligence ကိုဆိုလိုတာပါ။ နောက်ထပ် AI အကွန်ယက်ကိုစမ်းသပ်, ထို့နောက်ပုံရိပ်တွေအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်ပထမဆုံး network သူတို့ကိုပယ်ချသို့မဟုတ်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ကသံသရာအတွက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျတိုင်းခြေလှမ်းနှင့်အတူဇာတ်ကောင်လုပ်ဖို့ generate နိုငျသညျ, ဒါကြောင့်သင်နေ့တိုင်းလူတွေအပေါ်လုံးဝအယောင်ဆောင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်များတက်အဆုံးသတ်သောကြောင့် (သင်ဖြစ်နိုင်သည်လမ်းပေါ်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းကဲ့သို့) ပေါ်လာပါသည်။ ဒီအလုပ်လုပ်တယ်အတိအကျဘယ်လောက်သိလို, NVIDIA (PC များကြောင့်လူသိများဂရပ်ဖစ်ကဒ်ထုတ်လုပ်သူ) အဖြစ်အောက်ကဗွီဒီယိုကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။
ဒါဟာရေးစပ်ဒီနက်ရှိုင်းသောအတု technique ကို, ဒါပေမယ့်လည်းဘယ်လိုဥပမာရုပ်ရှင်များအတွက်နက်ရှိုင်းသောအတုပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုံးစွဲဖို့သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအဝင်ရှည်လျားသောသမိုင်းအပါအဝင်လူမှုမီဒီယာ profile များကို (generate မှသိရန်သာအထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြား likes နက်ရှိုင်းသောအတုလူမှုမီဒီယာ profile များကို) ။ ထို့ကြောင့်, အွန်လိုင်းရိုးရှင်းစွာ "အိမ်လုပ်သားများ" သို့မဟုတ်န်ထမ်းများကစောင့်ကြပ်လူမှုမီဒီယာဆွေးနွေးမှုများဥပမာ, သငျသညျဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူကိုအတူဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့နက်ရှိုင်းသောအတုပရိုဖိုင်းကို (မိတ်ဆွေများကကွန်ယက်ကိုလည်းနက်ရှိုင်းသောအတု profile များကိုဖြင့်ထပ်မံဖြည့်သည်) ၏နောက်ကွယ်မှဖျောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဦး telemarketing ရုံးသည်အဘယ်မှာရှိ။ သူတို့ကဆွေးနွေးမှာသူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လူအခြို့သောဦးတည်ချက်အတွက်လူတို့တွင်စိတ်ဓါတ်များအဖြစ်ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ရဲ့နောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့သည်ပလီကေးရှင်းကိုကြည့်ကြကုန်အံ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုစတင်ရယူမီကဂိမ်းနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုသိရန်အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူများအများကြီးပိုရှည်ထိုကဲ့သို့သောနည်းစနစ်ဝင်စား။ သင်တစ်ဦးနေအိမ်ဥယျာဉ်-and မီးဖိုချောင် PC ကိုသူ့ဟာသူပေါ်မှာနေရာချနိုင်အောင်သို့သော်အလုပ်ယခုရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
Paul Walker တစ်ဝက်တစ်ပျက် Fast & Furious7ရိုက်ကူးကွယ်လွန်သွားသောအခါ, ကုမ္ပဏီ Weta ဒီဂျစ်တယ် Paul Walker ၏ရိုက်ကူးရေးပြီးစီးရန်အတွက်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဟောင်းပုံများ, ပေါလု၏ညီအစျကိုယျခန်ဓာကို Scan ဖတ်နှင့်ပေါလုရဲ့ဦးခေါင်း digital အဖြစ်နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ရာမှနိုးထစေရန်, Weta ဒီဂျစ်တယ်အသက်ပြန်ရှင်ပေါလုက Walker ကိုပြု၏။ အောက်ပါဗီဒီယိုသည်ဤအလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ပေးသည်။
နှစ်ပေါင်းအဘို့, သရုပ်ဆောင်များကိုနောက်ပိုင်းတွင် CGI (ဒီဂျစ်တယ်) ကျော်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအက္ခရာများနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖမ်းယူဖို့ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် 3D ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူ technique ကိုလည်းမရှိ။ ဒါကတစ်ခုသာရွေ့လျားမှုဖမ်းယူဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသရုပ်ဆောင်များကိုအတူ Paul Walker များအတွက်အသုံးပြုသော technique ကိုဆင်တူသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ technique ကို (အောက်တွင်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) ယခုအနိမ့်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူလူများအတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီ technique ကိုပြီးသား (တွေ့မြင် 2009 ကနေရုပ်ရှင်နဲ့အသုံးပြုခဲ့သည်ထားတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုဥပမာ ဒီမှာ).
က software ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အာရုံကြောကွန်ရက်များကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့် NVIDIA, ဤဝတ်စုံနှင့် CGI နည်းပညာအသုံးပြုမှုပြီးသားအမှန်တကယ်မှီရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီနက်ရှိုင်းသောအတုမျက်နှာများနောက်ကွယ်မှတည်ရှိသည်သောတူညီ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ NVIDIA သာယခုဒါမှလည်းမရှိခဲ့ချေ-မျက်နှာများ generate နိုင်ပေမယ့်ကင်မရာတစ်မြို့မှတဆင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ရှိ (အစစ်အမှန်အချိန်) နှင့်အတူတစ်ဦးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရှုခင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ထိုသို့သောနည်းစနစ်ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ် Self-propelled ယာဉ်များ၏ AI အဆော့ဖ်ဝဲကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့သုံးနိုင်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖမ်းယူဝတ်စုံကိုဘို့လိုအပ်ကြောင်းပပျောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းတဲ့ GoPro ကင်မရာသို့စ webcam လုံလောက်ပါတယ်။ 1 ကနေကဒီမှာကွညျ့ရှု: 03 ပိုပြီးအောက်ကဗီဒီယိုမှာသူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ ..
ယခုတွင်သင်သည် Real-time လုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းမတည်ရှိပါဘူးထင်ပေလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်စဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပြီးသား Non-တည်ရှိလူတွေကယေဘုယျအားဖြင့်ရန်သူတို့အကွန်ယက်မှတဆင့်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအထက်တွင်မြင်ကြပြီ။ ကျနော်တို့အခုဇာတ်ကောင်အဖြစ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ဦးစလုံးအာရုံကြောကွန်ရက်များအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ မေးခွန်းအစစ်အမှန်အချိန်မှာလည်းသာလုပ်နိုင်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ထောင့်ပတ်လည်မှာ Real-time မျက်နှာပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း၏ technique ကို။ ဒါကပြီးသားယခုနှစ် 2015 (အောက်တွင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ) ကတည်းကရိုးရှင်းတဲ့အိမ်မှာ PC အတွက်တည်ရှိ။
အားလုံးအတွက်ကျနော်တို့ကရှည်လျားနက်ရှိုင်းသောအတုဗီဒီယိုများ generate ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောနိုင်တက်ကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ technique ကိုဒါ General ရန်ဘက်ပြုသောကွန်ယက်၏ပေါ်ပေါက်ရေး, အာရုံကြောကွန်ရက်များနှင့် Real-time မျက်နှာပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းသောသည်သင်အမှန်တကယ်မိနစ်တစ်ဦးလည်းမရှိခဲ့ချေလူတစ်ဦး၏တစ်ဖွဲ့လုံးသမိုင်းစေနိုင်သည်, ထိုလည်းမရှိခဲ့ချေလူတစ်ယောက်တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး မည်သည့်ကင်မရာကိုထောင့်အပေါင်းတို့နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများအနေဖြင့်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါသက်ရောက်မှုကဘာတွေလဲ? သင်နှင့်အတူစတင်နိုင်အောင်အမှန်တကယ်သငျသညျကိုဗီဒီယို 100% ကိုဆုံးရှုံးနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ကြည့်ရှုခြင်း ဒီမှာ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး CGI ပြီးသားရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်နည်းစနစ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာတထောင်ကိုအနည်းငယ်ယူရိုတစ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှပြီးသားဒီအလုပျနိုငျကြောင်းသို့သော်ဒါရိုးရှင်းတဲ့။ ကျနော်တို့မီဒီယာရိုးသားဖြစ်ကြောင်းယူဆနေကြသည်, ထို့နောက်ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကဤနည်းစနစ်လျှောက်ထားမယူဆနိုင်ပါ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့အစိုးရများကလူအသစ်နှင့်တင်းကျပ်ဥပဒေပြဌာန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ခံမှု mode ကိုရောက်စေဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးအသုံးပြုဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားလျှင်, ကျွန်တော်နည်းပညာပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်သဘောပေါက်ရမယ်ဘာမှအတုသတင်းထုတ်လုပ်လမျး၌ရပ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကြောင့် (အခြားဘီလျံနာသူ) တစ်ဦးကို TV ထုတ်လုပ်သူများ၏လက်၌နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအေဂျင်စီ (ဒတျချြစာနယ်ဇင်းအေဂျင်စီ, ANP အတိုကောက်) ထိုသိရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းပညာနှစ်ပေါင်းအတွက်အသုံးပြုမခံကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမလဲ?
ဒါဟာမီဒီယာစိတ်အားထက်သန်စွာမာတင် Vrijland အဓိကပင်မမီဒီယာသင်္ဘော၏အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ရိုက်နှက်သည့်ယိုစိမ့်စဉ်းစားနေကြတယ်ပုံရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်တကယ်တော့မီဒီယာပုံရိပ်များ manipulate နိုငျပုံကိုရှင်းပြသည်။ Jort Kelder ထို့ကြောင့်အလက်ဇန်းဒါးKlöppingတီဗီအစီအစဉ်မှာရညျးအိုး & Klöppingရှိကြ၏ ပြသ အဘယ်အရာကို deepfakes ။ အဆိုပါရေဒီယို ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း ငါဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အကြောင်းကိုရေးဖို့ဘယ်မှာ BNR မကြာသေးမီကကစားကဒ်များ (ဒါကြောင့်အမြင်မန်နေဂျာ) ။ ဒါဟာထိတ်လန့်တိုးပွားလာသိသာသည်နှင့်အစီအစဉ်ကိုချမှတ်သူများဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့ကြည့်ရှုသူနှင့်နားထောင်သူကြိုးစားသင့်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ (Jort မြေအောက်ခန်း၏စကား၌ဟောပြော) ကိုလူအုပ်စုပုန်ကန်ထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးသောကွောငျ့, မီဒီယာနှင့်ဒီမိုကရေစီ၌ခိုလှုံအားဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အားလုံးအစိုးရများနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်များအတွက် "ဖြေရှင်းချက်" လို့သူတို့စစ်မှန်မှုအတွက် check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုရေစာတစ်မျိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ မေးခွန်းအစိုးရများနှစ်ပေါင်းအတုသတင်းသူ့ဟာသူအသုံးပြုတဲ့အခါမှတဆင့်ဥပဒေပြုတွန်းနှင့်လူများသို့မဟုတ်ရေစာသို့မဟုတ်အဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးအမဲသတ်သမားကစပြီးမိမိအသားကိုငြင်းပယ်? အဘယ်သူမျှမ၏သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ယောဟနျသက de Mol, အ NIS ၏ကလောင်ကနေအားလုံးသတင်း, အကြေးနန်းနှင့်ဒါအမြဲလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ရိုးသားခဲ့! Kuch ။ သင်အမှန်တကယ်ဆရာယောဟနျက de Mol "ပြောတစ်ချိန်က TV ပေါ်မှာယနေ့သို့မဟုတ်မနက်ဖြန်တွင်ပုံပေါ်ထင်ပါနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်း, ငါသညျငါ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိသူအပေါငျးတို့တီဗီစတူဒီယိုနှင့် software နှင့်အတူအတုသတင်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ငါအတုသတင်းတင်ပြခြင်းနှင့်အခွန်ရန်ပုံငွေ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူကစားနဲ့အရသာရှိတဲ့အကြှနျုပျ၏အိတ်ကပ်ကျပ်ရှိသည်ဟု"? အဘယ်သူမျှမ၏သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်သင်တန်းကသင်အခြားဘယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချရပါမီဒီယာနှင့်အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိသည်သင့်သလဲ ဖတ် ဒီမှာ...
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားနက်ရှိုင်းသောအတု applications များ:
နက်ရှိုင်းသောအတုလူမှုမီဒီယာ profile များကို
သတင်း (အတုသတင်းဘဏ်ဍာ) တွင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကဗီဒီယို
source link ကို entries တွေကို: bnr.nl, wikipedia.org
ဘယ်လိုမီဒီယာအတုသတင်း AI အ (Artificial Intelligence) ကို အသုံးပြု. နိုင်ပါတယ်
ဤအအန္တရာယ်ရှိတဲ့ PBS ၏ search အတွက်ကသိသိသာသာတိုးတက်အဆိုပါ Kolder နေ
မိုက်ကယ် P. Thijs အိပ်ချ် Jos ခလူတိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုသမျှသောမီဒီယာလူသတ်မှုလျင်မြန်စွာမိတ်ဆက်စကားထိတ်လန့်ဥပဒေပြဌာန်းဦးဆောင်လမ်းပြ
Tags:: ရန်သူ, ai, CGI, deepfakes, ဒစ်ဂျစ်တယ်, မျက်နှာ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, GAN, ယေဘုယျအားဖြင့်, ထောက်လှမ်းရေး, ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော, မီဒီယာ, အတုသတင်း, ကွန်ရက်များ, အာရုံကြော, သတင်း, NVIDIA, ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း, Weta
26 မှဇွန်လ 2019 06: 15
ဒီဂြိုဟ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များနေဆဲအတူတူနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ဟာကြိမ် kwa နည်းပညာနှင့်အတူကောင်းစွာသွားပါ။ ယခင်ကသင်ပင်တပြင်လုံးကိုအမျိုးအနွယ်တစ်ဦးလည်းမရှိခဲ့ချေကိန်းဂဏန်း၏ပျော်စရာစေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲကျမ်းလိပ်များကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏လက်သို့ပုံပြင်ချပြီးခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်မယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်နှင့်တူကြ၏။
အဆိုးဆုံးကတော့ယနေ့လူသူတို့သည်ငါတို့အရင်ထက်ပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်ပါတယ်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သေးသောက်နှင့်တစ်ဦးရေစာများအတွက် fuck ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ slaves ဖြစ်ကြသည်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီအဲဒီမှာမဟုတ်ဘူးပါဘဲ။
သူတို့က "သင်သူတို့ပြောသမျှကိုယုံကြည်မနေသင့်ပါ" ဟုပြောရန်အသုံးပြု
ယနေ့ခေတ်ကြှနျုပျတို့သညျ "သင်ကြည့်ရှုအရာအားလုံးကိုမယုံကြည်သင့်ပါတယ်" ဟုပြော
« Katwijk သောကြာနေ့ကနေအင်ယာသိုးပုဂ္ဂလိကပိုင် "သင်ျဂွိုဟျ"
ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်: လူအဆင်းလှသောဂျာကင်အင်္ကျီလုယက် »
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ
Bridget Maasland က Martin Vrijland ကိုလိမ်တာကြောင့်André Hazes ပြိုကွဲခဲ့သလား။
ဘာကြောင့်မူလစကြ ၀ universeာသည်သင်၏မူလနေအိမ်ဖြစ်သည်
တူရကီသည်ဆီးရီးယားကိုသိမ်းပိုက်တော့မည်လား၊ အမေရိကန်၊ ရုရှားနှင့်အီရန်နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
မာတင် Vrijland op Bridget Maasland က Martin Vrijland ကိုလိမ်တာကြောင့်André Hazes ပြိုကွဲခဲ့သလား။
Ellie op Bridget Maasland က Martin Vrijland ကိုလိမ်တာကြောင့်André Hazes ပြိုကွဲခဲ့သလား။
ကင်မရာ2op Extinction Rebellion နှင့်မြင့်မားသောအခွန်များတောင်းခံရန်နှင့်သင်၏ဘဝ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်
ကင်မရာ2op Bridget Maasland က Martin Vrijland ကိုလိမ်တာကြောင့်André Hazes ပြိုကွဲခဲ့သလား။
မာတင် Vrijland op ရုရှားဗုံးကြဲလေယာဉ်များသည်ဆီးရီးယားရှိတူရကီသံချပ်ကာယာဉ်များကိုဖျက်ဆီးပြီးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်